HowTo Archives | Pyae Heinn Kyaw's Blog
HowTo, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE FTTH အင်တာကနက်တွေပိတ်မယ်ဆိုတာ Confirmed မဖြစ်သေးပေမယ့် တကယ်တမ်းပိတ်ခံလိုက်ရရင် SMS တွေကနေပဲ အဓိကဆက်သွယ်လို့ရတော့မှာပါ .. SMS တွေရဲ့ပြဿနာက ပို့နေတဲ့စာတွေကိုကြားကနေဖြတ်ကြည့်ပြီး Monitoring လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် မလုံခြုံပါဘူး . ဒါကြောင့်ပို့မယ့်လူက ပို့မယ့်စာကို Password တစ်ခုနဲ့ Encrypt လုပ်ပြီးပို့ .. လက်ခံတဲ့လူက အဲ့ Password သုံးပြီး Decrypt လုပ်ပြီးမှဖတ် .. အဲ့လိုဆိုရင် ပို့ထားတဲ့စာကို ကြားထဲကနေဖြတ်ဖတ်လည်း ဘာတွေပို့နေမှန်းမသိဖြစ်နေမှာပါ . လက်ရှိ iOS မှာ Text တွေကို Encrypt လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ App တစ်ခုနဲ့အရင်စမ်းပြပါမယ် .. Android မှာလည်း သုံးလို့အဆင်ပြေတဲ့ App တွေရှိရင် Comment မှာ မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦး . …
Monitoring လုပ်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးအောင် စာတွေကို Encrypt လုပ်ပြီး SMS ပို့ကြမယ် Read More »
ယူနီကုဒ္ဗားရွင္းေအာက္တြင္ ေဇာ္ဂ်ီဗားရွင္းျဖင့္လည္းဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ UNICODE ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမသွားခင် သင့်ဖုန်းမှာပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် .. ဒီလိုပြင်ဆင်ထားမှသာ မတော်တဆ ဖုန်းစစ်ဆေးခံရတာမျိုး, ဖုန်းပျောက်သွားတာမျိုး, နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် .. ကဲစလိုက်ရအောင် 1. Encrypt ဖုန်းကို Encrypt လုပ်ထားဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ် .. ဒါမှသာကိုယ့်ဖုန်းကိုရသွားတဲ့လူက အလွယ်တကူမဖွင့်နိုင်မှာပါ .. iPhone တွေမှာဆို Settings > Face ID & Passcode မှာ Passcode ကို On ပေးထားတာထာနဲ့ Auto Encrypt လုပ်ပြီးသားပါ Android တွေမှာတော့ Settings > Security & Location > Advanced > Encryption & Credentials > Encrypt …
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမသွားခင် သင့်ဖုန်းမှာလုပ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အချက်များ Read More »
UNICODE 1.1.1.1 App က မြန်မာနိုင်ငံမှာ Social Media တွေကဘန်းလိုက်တာကနေ နာမည်စကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ် .. အမှန်တော့ 1.1.1.1 ဆိုတာ နာမည်ကြီး US Company CloudFlare ကထုတ်ထားတဲ့ App ပဲဖြစ်ပါတယ် .. 1.1.1.1 ဆိုတဲ့ App ရဲ့ IP Address ကိုက CloudFlare ရဲ့ Public DNS Server ဖြစ်နေပြီးတော့ လူတိုင်းအသုံးပြုလို့ရအောင် Free Access ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် (Google ရဲ့ 8.8.8.8 နဲ့ 8.8.4.4 လိုပါပဲ) 1.1.1.1 App မှာ Mode2မျိုးရှိပါတယ် .. 1.1.1.1 နဲ့ WARP+ ဆိုတဲ့ …
1.1.1.1 ဒါမှမဟုတ် WARP+ ဆိုတာ စိတ်ချရရဲ့လား? WARP+ GB တွေဘယ်လို Hack ရမလဲ? Read More »
HowTo / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ေဇာ္ဂ်ီဗားရွင္းျဖင့္လည္း ေအာက္ဆုံးမွာေရးသားထားပါသည္။ အခုအချိန် မြန်မာအစိုးရက Facebook ဒါမှမဟုတ် တခြား App တွေကိုသာ Ban ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ VPN ချိတ်ပြီး Ban ထားတာတွေကိုကျော်သုံးလို့ရပါတယ် ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံး Free4VPN ခုကို ကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ် 1. Proton VPN လစဉ် Data ကန့်သတ်ချက်မရှိပါဘူး .. Privacy and Security ပိုင်းမှာလည်း VPN တွေထဲအကောင်းဆုံးပါပဲ .. အားနည်းချက်ကတော့ လူသုံးများတဲ့အချိန် Speed နှေးသွားတတ်ပါတယ် Availability – Windows, Mac, Android, iOS, Linux Download Link for iOS – https://apps.apple.com/au/app/protonvpn-fast-secure-vpn/id1437005085 2. …
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook သာ Ban ခံရရင် ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲ? Read More »
UNICODE တကယ်လို့သင်သာ Facebook အတွက် Location Access ဖွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင် Facebook ကသင်သွားသမျှနေရာတွေကို ထောက်လှမ်းပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် သင်ရွေးပေးထားတဲ့ Settings ပေါ်မူတည်ပြီး သင် FB သုံးမနေရင်တောင် Facebook ကသင်သွားသမျှနေရာတွေကို ထောက်လှမ်းထားပြီး မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားလို့ရနေပါတယ် ဒီတော့ Facebook ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ .. အရင်ဆုံး အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (Password တောင်းရင်ရိုက်ပေးလိုက်ပါ) .. ပြီးရင် ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်တွေသွားထားတယ်ဆိုတဲ့ Location History ကြီးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် Location History ကြည့်ရန် Link – https://www.facebook.com/location_history/view/ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ .. 25 ရက်နေ့ကကျွန်တော်သွားထားသမျှနေရာတွေအကုန်လုံးကို အချိန်နဲ့တကွ မှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် .. ကောင်မလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကောင်လေးဘယ်တွေသွားနေလဲ ဒီနည်းနဲ့ကြည့်လို့ရပါသေးတယ် …
သင်သွားသမျှ နေရာတိုင်းကိုသိနေတဲ့ Facebook ရဲ့ Location Tracking အကြောင်းနဲ့ အဆိုပါ Location History ကိုဖျက်နည်း Read More »
Apple user တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Apple ID ကို Region ပြောင်းနည်း
Apple, HowTo, Knowledge / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE Apple ID ဆိုတာ iDevice တွေအတွက် မရှိမဖြစ် Account တခုပါပဲ .. တခါတလေ ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Apple ID Region မှာကိုယ်လိုချင်တဲ့ App တွေမရှိတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် .. ဥပမာ Myanmar Region Apple ID မှာ YouTube App ရှာမရတာမျိုးပေါ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က Region ပြောင်းသုံးဖို့လိုအပ်လာပါတယ် .. အရင်ဆုံး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ Fake Address ကိုကြိုရှာထားရပါမယ် .. ဥပမာ သင်က Singapore ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် Google မှာ “Singapore Fake Address Generator” လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Search Result မှာပထမဆုံးပေါ်လာမယ့် Result ထဲဝင်ထားလိုက်ပါ …
Apple user တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ Apple ID ကို Region ပြောင်းနည်း Read More »